Vans X Horror Collection Mitondra 'It', 'The Shining' ary bebe kokoa amin'ireo Sneakers mahatsikaiky - iHorror
Home Cool zavatra hovidiana Vans X Horror Collection Mitondra 'It', 'The Shining' ary bebe kokoa amin'ireo Sneakers mahatsikaiky
Vans X Horror Collection Mitondra 'It', 'The Shining' ary bebe kokoa amin'ireo Sneakers mahatsikaiky
Sarotra ny misafidy hoe iza no zakanay.
by Trey Hilburn III Septambra 21, 2021
by Trey Hilburn III Septambra 21, 2021 17,103 hevitra
Vans dia manamboatra hanao crossover milay miaraka amin'ny horohoro ao anatin'ny Vans X Horror Collection. Tao amin'ny sioka vao haingana avy amin'ny Vans, nizara fahitalavitra fantsom-boaloboka misy tabilao iray nizara ny vazivazy momba ilay kiraro vaovao izy ireo. Anisan'izany ny fanangonana It, The mamirapiratra, Zoma ny 13th ary Alarobia eny amin'ny arabe Elm.
Ny sneakers tsirairay avy dia miaraka amin'ny endriny tsirairay avy. Tena mihady ny famirapiratan'i The mamirapiratra kiraro. Izy ireo dia miaraka amina endrika mavo mitovy amin'ny afisy mahazatra, miaraka amin'ny fanontana kely izay maneho The mamirapiratra. Ny tongotra tokana dia misy "Redrum" voasoratra manodidina azy ireo. Toy izany koa ny It ny kiraro dia manana "Izahay rehetra mitsingevana" voasoratra amin'ny sisin'ny faladiany. Izy ireo koa dia manana balaonina mena vita amin'ny lamina. Balaonina mena pennywise.
Ireo sneakers roa hafa dia milay ihany koa. ny Alarobia eny amin'ny arabe Elm kiraro manana ny sary miloko akanjo mafana Freddy Krueger aseho. Izy ireo koa dia tena mahatsiravina mijery ihany koa. Manana kalitaon'ny loko manta vaovao ho an'ny endrika izy ireo. Loko sy famolavolana azo antoka fa mifanaraka amin'ny fanjakan'ny Dream Master.
Ny slip-on mahazatra dia mankany amin'ny Zoma ny 13th famolavolana. Ireo dia manana kiraro iray nolokoina tamin'ny tarehin'i Jason ary ilay iray hafa misy ny lohatenin'ilay sarimihetsika.
Ilay teaser fohy ao amin'ny Twitter dia milaza amintsika fotsiny fa hanomboka amin'ny Oktobra ny fanangonana. Saingy, tsy manome daty manokana. Hamaray antoka fa hanome fanavaozana anao izahay raha manana fampahalalana bebe kokoa.
Ny tsirairay amin'ireo dia tena tsara tarehy. Raha ny marina, sarotra ny misafidy izay harahina. Iza no tianareo indrindra? Ampahafantaro anay ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra.
Ho avy amin'ity volana oktobra ity, ny Vans x Horror dia manangana ny horonantsary horonantsary mampihoron-koditra tianao indrindra. pic.twitter.com/aeB6lbXlcB
- Vans (@ VANS_66) Septambra 21, 2021